MBP: माइक्रो ब्लगिंग प्रदायक र प्रोटोकल | Martech Zone
MBP: माइक्रो ब्लगिंग प्रदायक र प्रोटोकल
शुक्रबार, जुन 13, 2008 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
तपाईं मान्छेहरू यो झगडाको बारे मा केहि समय पछाडि पढ्न सक्छ रोबर्ट Scoble र ट्विटर। Scoble ट्विटर संग भेट गरे र स्थिति समाधान। केही व्यक्तिहरू यी माइक्रो-ब्लगि services सेवाहरूको साथ व्यवसाय मोडेलको बारेमा कुरा गर्दैछन् लोकप्रिय प्रयोगकर्ताहरू सेवाको लागि भुक्तान गर्छन्.
म वास्तवमै राम्रो प्रस्ताव पेस गर्न चाहन्छु र त्यो नेटको माइक्रो-ब्लगिंग प्लेटफर्महरूको लागि हो (फ्रेन्डफीड, Tumblr, जाइकू, twitter, शक्ति, सेस्मिक, ब्राइटकाइट, प्लर्क, किक, आदि) एक माइक्रो ब्लगिंग प्रोटोकलमा निर्णय गर्न। यी सबै सेवाहरू त्यसपछि माइक्रो-ब्लगिंग प्रदायक बन्न सक्दछन्।
मोबाइल, भिडियो, ध्वनी, लिंक, अनुलग्नक, फोटो, र सन्देशहरू सबै एकल, सफ्ट प्रोटोकलमा समावेश हुन सक्छ। 'फलो' गर्न सक्ने क्षमता सबै प्लेटफर्महरूमा लाभान्वित हुन सक्छ। प्रत्येक प्लेटफर्म उनीहरूको प्रयोगकर्ता उपकरणहरू र ईन्टरफेसमा अर्कोबाट फरक हुन सक्दछ, तर केहि लोड र लोकप्रियता अर्कोमा वितरित हुन सक्दछ। प्रत्येक प्रदायकले बिभिन्न मिडियालाई समर्थन पनि गर्दैन। यसले अधिक अपटाइम प्रदान गर्दछ र प्रयोगकर्ताहरूले ग्राहकहरू आफुलाई मन पराउने उत्तम अनुप्रयोगहरुतिर तान्न सक्छन्।
यो उपन्यास दृष्टिकोण होईन - यो ईन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ईमेलको साथ गरेको जस्तो हुनेछ। मँ मँ चाहेको क्लाइन्ट प्रयोग गर्न सक्छु र मेरो सम्पर्क सूचीमा जो कोहीलाई विश्वव्यापी सम्पर्क गर्दछु।
त्यसोभए त्यहाँ तपाईंसँग यो समय छ - उद्योगमा माइक्रो-ब्लगि Prot प्रोटोकलको लागि समय! र हामी प्रदायकहरु माइक्रो ब्लगिंग प्रदायकहरु कल गर्नुहोस्। यो उपभोक्ता को लागी सजिलो बनाउनु पर्छ!
तपाइँको अफलाइन मार्केटिंगमा अनलाइन नबिर्सनुहोस्!
जुन 13, 2008 बिहान 11:59 बजे
XMPP राम्रो गर्नुहुनेछ।
जुन 13, 2008 मा 2: 45 PM
यो विचार लाई माया गर्नुहोस्, मलाई लाग्छ यदि यो कहिले हुन्छ भने?
जुन 13, 2008 मा 6: 37 PM
माइक्रो ब्लगिङ एकीकृत सेवा हुनुपर्छ जहाँ प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई बल्क पाठ सन्देश (सबै साथीहरूलाई अद्यावधिक गर्न), सामाजिक सञ्जालहरूमा स्थिति पट्टी (जस्तै फेसबुक स्थिति प्रकार्य), र इमेल हस्ताक्षरको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
जुन 16, 2008 बिहान 1:46 बजे
एक राम्रो विचार जस्तो लाग्दछ, कम्तिमा एक व्यक्ति बाहेक ती धेरै कम्पनीहरू भित्र प्रत्येक व्यक्तिले वास्तवमा यो हुनको लागि नेतृत्व लिनुपर्दछ। म निन्दनीय हुन सक्छु, तर मैले धेरै सम्बन्धित चीजहरू देखेको छु जुन हुन सक्छ तर मैले यो भइरहेको देखेको छैन, कम्तिमा गुगलले प्रोटोकल स्थापना नगरेसम्म र "सबैले यसलाई पछ्याउनुहोस्, अन्यथा।" नकारात्मक भएकोमा माफ गर्नुहोस्, तर एक पटक दुई चोटि लजायो।
BTW, निश्चित छैन यदि तपाईंले याद गर्नुभयो तर मैले अन्तमा स्विच गरें मेरो ब्लग लगभग एक वर्षको आत्म-लापिएको अन्तराल पछि WordPress मा। म थिएँ पर्खँदै समय (र प्रेरणा) को लागी अन्ततः मेरो पुरानो सफ्टवेयरबाट परिवर्तन गर्न को लागी अधिक समस्या भएको थियो कि यो लायक थियो। अब म तपाइँको ब्लग र अन्य मा टिप्पणी मात्र भन्दा धेरै गर्न सक्छु; म वास्तवमा फेरि ब्लगिङ सुरु गर्न सक्छु!
FYI, मैले अहिले सक्रिय रूपमा फलो गरेको रूपमा सूचीबद्ध गरेको तीन (3) ब्लगहरूमध्ये एउटा मात्र तपाईंको हो। मलाई लाग्छ मैले "को अर्को ब्लगरोल कोटी थप्नु पर्ने हुन सक्छब्लगहरू म पछ्याउने थिए यदि मसँग मात्र समय थियो!"त्यहाँ बाहिर सबै अन्य महान ब्लगहरूको लागि। '-)
जुन 16, 2008 बिहान 8:42 बजे
साँचो भनौं, मैले ब्लगहरू (मलाई मनपर्ने) जति पढ्नु पर्ने हो, त्यति गरिरहेको छैन। कहिलेकाहीँ काम बाधा पुग्छ ;)
म समर्थनको कदर गर्छु र ब्लगस्फेयरमा फिर्ता स्वागत छ, माइक!
जुन 16, 2008 मा 4: 13 PM
साँच्चै, म देख्दिन कि कसैसँग धेरै ब्लगहरू पढ्ने समय छ। जब म आफैंलाई एक अवधिको लागि जान अनुमति दिन्छ जहाँ मैले केहि पनि गरिनँ र त्यसो गर्दा म आफैलाई साँच्चै नराम्रो महसुस गर्छु। त्यसोभए यदि मैले आफैलाई "वार्तालाप" ("बहस" पढ्नुहोस्) मा चुस्न अनुमति दियो भने यो वास्तवमै टाइमस्क बन्छ। मलाई थाहा छैन कि लाभदायक रूपमा रोजगारी भएका मानिसहरूले कसरी यसको लागि समय खोज्छन्।
तर मैले तपाइँको पढ्न जारी राख्नुको एउटा कारण यो हो कि, मलाई रुचि राख्ने विषयहरूको लागि, तपाइँको "संकेत" मा धेरै ब्लगहरू भन्दा "शोर" अनुपात भन्दा धेरै उच्च छ। धन्यबाद।